चट्याङ लागेर भारतमा १०७ को ज्या न गयाे – Enepali News
चट्याङ लागेर भारतमा १०७ को ज्या न गयाे
June 26, 2020 527
एजेन्सी, १२ असार । भारतमा च ट्याङका कारण १०७ को मृ त्यु भएको छ । जसमध्ये बिहारका ८३ रहेका छन् भने उत्तर प्रदेशमा २४ को मृ त्यु भएको छ । भारतकाे आपत्कालीन प्रबन्धन विभागकाे अनुसार बिहीबार साँझ साढे ६ बजेकाे समयमा परेकाे च ट्याङ लागेर बिहारमा ८३ जनाकाे ज्या न गएकाे हाे । च ट्याङ लागेर कैयाैँ घा इते भएकाे भारतीय सञ्चारमाध्यमले जनाएका छन् ।
बिहारकाे २३ जिल्लामा चट्याङ पर्दा यति ठूलाे सङ्ख्यामा मानवीय क्षति भएकाे हाे । सबैभन्दा धेरै गाेपालगञ्जमा १३ जनाकाे ज्या न गएकाे छ भन् मधुबनी र नबादामा आठ–आठ जनाकाे ज्यान गएकाे छ । यसबारे भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले आफ्नो समवेदना प्रकट गरेका छन् । उनले ट्वीट गर्दै लेखेका छन्, ‘बिहार र उत्तर प्रदेशका केहि जिल्लामा भारी वर्षा र चट्याङका कारण मानिसहरुको नि धन भएको दुःखद समाचार पाएँ । राज्य सरकार तत्परताका साथ राहत कार्यमा जुटेका छन् । यो आपतकालीन स्थितीमा जसले आफ्नो ज्या न गुमाउनुपरेको छ, उनीहरुको परिवारप्रति आफ्नो समवेदना प्रकट गर्छु ।’
भारतको मौसम विभागले बिहारमा अबको तीनदिनसम्म भारी वर्षा हुने चे तावनी जारी गरेको छ । मौसम विभागले भारती वर्षा र क्षतीको आशंका जताएको छ । भारी वर्षाका कारण जन धनको क्षती हुने, तल्लो स्थान जलमग्न हुने, यातायात र विजुली आपूर्ती अ वरोध हुने र नदीको जलस्तरमा वृद्धि हुनसक्ने चे तावनी दिइएको छ । शुक्रबारका लागि राज्यका लगभग १० जिल्ला रेड जोन घोषित गरिएको छ । यसमा पूर्वी चम्पारण, पश्चिमी चम्पारण, गोपालगञ्ज, सितामढी, मधुबनी, सुपौल, अररिया, किशनगंज, पूर्णिया, सहरसा र मधेपुरामा अत्यधिक वर्षा हुने आ शंका जताइएको छ ।
काठमाडौं – मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले शुक्रबारको मौसम पूर्वानुमान जारी गरेकोे छ । मौसम पूर्वानुमान महाशाखाका अनुसार हाल नेपालभर मनसुनी वायुको प्रभाव रहेको छ साथै मनसुन न्युन चापीय रेखा नजिक रहेको छ । यसैगरी, पूर्वानुमानले हाल देशभर बदली रहेको छ र देशभर थोरै स्थानहरुमा वर्षा भइरहेको जनाएको छ ।
महाशाखाले जारी गरेको मौसम पूर्वानुमानका अनुसार आज दिउँसो देशभर सबै प्रदेशहरुमा सामान्य बदली रही धेरै स्थानहरुमा मेघगर्जन, चट्याङसहित हल्कादेखि मध्यम वर्षा हुनुका साथै प्रदेश १, प्रदेश २, र सुदूरपश्चिम प्रदेशका थोरै स्थानहरुमा मेघगर्जन, चट्याङसहित भारी वर्षा सम्भावना रहेको छ।भने, प्रदेश १ , प्रदेश २, प्रदेश नं ५ तथा गण्डकी प्रदेश थोरै स्थानहरुमा भारी वर्षाको सम्भावना रहेको पूर्वानुमानमा उल्लेख छ ।
यस्तै, राति देशको सबै प्रदेशहरुमा सामान्य बदली रही सबै प्रदेशका धेरै स्थानहरुमा मेघगर्जन, चट्याङसहित हल्कादेखि मध्यम वर्षाको सम्भावना रहेको महाशाखाले जनाएको छ ।
Prevमेलम्चीको पानी काठमाडौं आइपुग्न अझै एक वर्ष लाग्ने
Nextजिउँदैलाई मरेको बनाई सम्पत्ति कब्जा गरि लक्ष्मीलाई बनाइयो घर न घाटको, मृत्युको मुचुल्का बनाएर सम्पत्ति हड्प्ने देवर कहाँ छन् ?
आज चर्चित हाँस्य कलाकार जितु नेपाल ‘मुन्द्रे’को जन्मदिन
नवराज विककी आमा उर्मिलालाई प्रहरीले लाठी बर्सायो ( पोस्टमार्टम मै यस्तो रिपोर्ट आएपछि….)
सरिता गिरीविरुद्ध रमेश पर्साइले मुद्दा हाल्दै, साथ दिनेले सेयर गराै (1823)